मोबाइलमै भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहोस् यी एप - Tech News Nepal Tech News Nepal
बिहीबार, कार्तिक १३, २०७७ १२:१५
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसका कारण लामो समय घरमै बस्नुपर्ने भए पछि युट्युव भिडियो क्रियटरको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । यस्तो भिडियो एडिटिङका ससाना कामका लागि प्रोफेसनल एडिटरको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ ।
तपाईंलाई पक्कै पनि थाहै होला, प्रोफेसनल भिडियो एडिटरको एक किसिमको न्यूनतम शूल्क हुने गर्दछ । यस्तोमा हरेक साता दुई तीन वटा भिडियो एडिट गराउनु निकै खर्चिलो काम भइदिन्छ । सुरुमै भिडियोबाट आम्दानी हुने कुरा पनि भएन ।
यस्तोमा अनेक किसिमको खर्चले क्रियटरको उत्साहलाई विस्तारै कम गर्दै लगिरहेको हुन्छ । यदि तपाईं पनि यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफैं भिडियो एडिट किन नगर्ने ?
तपाईं मोबाइलमा केही एपको सहयोगमा सहजै प्रोफेसनल देखिने भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ । आज हामी तपाईंलाई मोबाइलमै भिडियो एडिट गर्न सकिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण एपको बारेमा बताउँदै छौं ।
काइन मास्टरको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । भिडियो एडिटिङका लागि उपलब्ध केही विकल्पमध्येको यो केही समय पहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि थियो ।
यो एक उत्कृष्ट भिडियो एडिटिङ एप हो । यदि एक पटक तपाईंले यसका सबै फंसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अर्को कुनै एपको आवश्यकता नै महसुस गर्नुहुने छैन ।
यसमा कयौं एड्भान्स फिचर पनि छन् । जसले एडिटिङका लागि ग्रिन स्क्रिन, ब्याकग्राउन्ड रिमुभल आदि जस्तो गज्जबको सुविधा दिने गर्दछन् ।
वाटरमार्क सहित यो एपको प्रयोग निःशुल्क रुपमा गर्न सकिन्छ । तर यसलाई हटाउनका लागि भने तपाईंले सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ ।
यो एपमा कयौं यस्ता फिचर छन् जसले यसलाई प्रिमियम भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको क्याटेगरीमा सामेल गराउँदछ । यो एप एन्ड्रोइड भर्सन ५.० वा त्यसभन्दा माथिल्ला भर्सनमा काम गर्दछ ।
यदि तपाईंको फोन यसभन्दा तल्लो भर्सनको छ भने यो एप प्रयोगमा केही झन्झट आउन सक्छ । काइनमास्टर एपलाई दश करोडभन्दा धेरैले डाउनलोड गरेका छन् भने ४.४ को रेटिङ पाएको छ ।
एण्ड्रोइडका लागि एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
भिडियोशो एपको प्रयोग पनि धेरैले गर्दछन् । यसको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेकै ययसबाट तपाईं एचडी क्वालिटीको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ ।
जब तपाईं यो एपको माध्यमबाट कुनै एडिटिङ सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि तपाईंले एउटा थिम छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तपाईंले भिडियोमा राख्न चाहेका फोटोहरुलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी केही मिनेटमै एपले भिडियो तयार पार्दछ । यस बाहेक तपाईं टेक्स्ट समेत आफ्नो रुचीको स्टाइलमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसमा तपाईं ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ । दुई वा सोभन्दा बढी भिडियो एकसाथ जोड्न पनि सक्नुहुन्छ ।
भिडियो कतै स्ट्रिम गर्ने अप्सन पनि यो एपले दिन्छ । यो एप प्रयोग गर्न सिक्ने कुरामा पनि धेरै समय लाग्दैन ।
यो भिडियो एडिटिङ एपमा जुम इन, जुम आउट जस्ता कयौं आकर्षक फिचर समेत छन् । गुगल प्ले स्टोरमा भिडियो शो एपको डाउनलोड पनि १० करोडभन्दा बढी छ भने यसले ४.६ रेटिङ पाएको छ ।
पछिल्लो समय यो एप रुचाउने प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । यो एप प्रयोग गर्न तपाईंको फोनमा एन्ड्रोइड ४.१ वा त्यसभन्दा माथिको भर्सन हुन जरुरी छ ।
पावरडिरेक्टर एप पनि भिडियो एडिटिङका लागि धेरै प्रयोगकर्ताले रुचाएको एप हो । यद्यपी प्रोफेसनल काम गर्ने प्रयोगकर्ताले यसको प्रयोग बढी मात्रामा गर्दछन् ।
यो मोबाइलसँगै विण्डोजका लागि पनि उपलब्ध छ । अधिकतर युट्युबर यो एप प्रयोग गर्न रुचाउँछन् ।
यसमा ग्रिन स्क्रिन, स्ट्रिम, स्प्लाइस, रोटेट, ब्राइटनेस कन्ट्रोल जस्ता एडिटिङका सबै प्रिमियम फिचरहरु देख्न पाइन्छ । एपमा तपाईंले पीआईपी अर्थात पिक्चर इन पिक्चरको सपोर्ट समेत पाउन सक्नुहुन्छ ।
यद्यपी यी फिचर कमजोर प्रोसेसर भएका स्मार्टफोनमा भने काम गर्दैनन् । त्यसो त तपाईं यसको प्रयोग निःशुल्क रुपमा गर्न सक्नुहुन्छ ।
तर त्यसमा वाटरमार्क रहने गर्दछ । यसलाई हटाउनका लागि तपाईंले सब्सक्रिप्सन प्लान लिनुपर्ने हुन्छ ।
एपको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले यसलाई ४.६ को रेटिङ दिएका छन् । यो एप एन्ड्रोइड भर्सन ४.४ वा त्यसपछिका भर्सन भएका फोनमा काम गर्दछ ।
यदि तपाईं युट्यबुर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो एप तपाईंका लागि उपयोगी हुन सक्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पाटो के छ भने यो सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क छ ।
भिटाको सहयोगमा तपाईं गज्जबको भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं फोटोबाट सानदार भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो एप तपाईंका लागि गतिलो विकल्प हुन सक्छ ।
फोटोका लागि तपाईंले एपलाई केही प्रमिसन दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा तपाईंले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक समेत राख्न सक्नुहुन्छ ।
यो एपमा एडिटिङका लागि प्रोफेसनल भिडियो तयार पार्न सकिने टूल तथा फिचरहरु छन् । यसको सेटिङमा गएर तपाईं वाटरमार्क राख्ने वा नराख्ने भन्ने विकल्प पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
भिटा एपलाई तपाईं गुगल प्ले स्टोरमा सहजै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । करोडौं प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरिसकेको यो एपका लागि एन्ड्रोइड ६.० वा त्यसभन्दा पछिल्लो भर्सन हुन जरुरी छ ।
इनशट एप पछिल्ला दिनहरुमा युट्युवरको रोजाइको एप बन्दै गएको छ । भिडियोमा क्याप्सन दिनका लागि समेत यसमा सहज छ ।
एकसाथ कयौं लेयर बनाएर यो एपमा भिडियो एडिटिङ गर्न सकिने सुविधा छ । साथै फरक फरक सामाजिक सञ्जालका लागि भिडियो फर्म्याट चयन गर्ने विकल्प पनि यसमा पाउन सक्नुहुनेछ ।
एकदमै प्रयोगकर्तामैत्री एपको रुपमा रहेको इनशट कुनै नयाँ प्रयोगकर्ताले केही मिनेटमै सही रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यो एप प्रयोग गर्नका लागि निःशुल्क छ ।
एपबाट भिडियो एक्पोर्ट गर्दा वाटरमार्क आउने गर्दछ । यसलाई हटाउनका लागि भने तपाईंले सब्सक्रिप्सन प्लान लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसमा अर्को सुविधा भनेको तपाईंले केही सेकेन्डको भिडियो हेरेर वाटरमार्क हटाउने विकल्प पनि पाउन सक्नुहुन्छ । गुगल प्ले स्टोरमा यो एपले ४.८ को रेटिङ पाएको छ ।
तपाईं यसबाट अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो एप प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको अनुभव कस्तो होला । यदि तपाईंको फोनमा एन्ड्रोइड भर्सन ५ वा त्यसभन्दा पछिल्लो भर्सन छ भने यो एप सहजै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।